Shuban iyo nafaqo darro halis ku haya carruurta ku jira xeryaha barakacayaasha Kismaayo Kismaayo 16 Dec, 2011In ka badan 20 carruur ah oo la ildaran cudurrada shuban biyoodka, nafaqa darrada iyo Jadeecada ayaa waxa 24-kii saac ee la soo dhaafay la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada hoose.
Carruurtani la ildaran xaaladahanicaafimaad darrada ah, ayaa waxaay u badan yihiin carruurta ku soo barakacay gudaha magaalada Kismaayo ee ku nool xeryaha kaamamka, waxaana ay xaaladdooda caafimaad tahay mid aad u liidato.
Mid ka mid ah howl wadeennada isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, ayaa Raadiyo Ergo u u sheegay in tirada dadka la xanuunsan cudurrada shubanka, nafaqa darradda iyo Jadeecada ee isbitaalka la soo gaarsiiyay ay kor u dhaafayso illaa 20 qof oo u badan carruur, kuwaasoo ay xaaladdooda aad u liidato oo aan wali helin adeegyo caafimaad oo ku filan.
Howl wadeennada xagga caafimaadka ee isbitaalka magaalada Kismaayo, ayaa waxaay sidoo kale aad uga dayriyeen adeegyada iyo agabka caafimaadka ee isbitaalka yaalla kuwaasoo u muuqdo kuwo gabaabsi sii noqonaya, waxaana ay arrintaasi ay soo dadajin kartaa in dadka xanuunsan ee isbitaalka la keeno ay si dhaqso ah u geeriyoodaan.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray cudurro fara ba'an ku hayay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada, waxaana ay dhaqaatiirta magaalada cudurradaasi u sababeeyeen roobab mahiigaan ah oo magaalada ka da`ay kuwaasoo biyo dhigay waddooyinka iyo xaafadaha magaalada.
Xasan Cali	December 18, 2011, 5:24 am
Walaal waan idin salaamay raadiyaha Ergo, anigu waxaan joogaa Baydhabo Soomaaliya, aad baana ulasocdaa idaacadaiyo wararka aad noo soo deysaane, waxaan rajeynaynaa isbadel alla xagiiisa kaimaada si loo helo wadankeena oo dhibaatada ka baxa.